Anonsys समीक्षा | के यो एक घोटाला हो? You तपाइँ सुरु गर्नु अघि पढ्नुहोस्
Anonsys, यस्तो पनि भनिन्छ Anon System, एउटा नयाँ स्वचालित ट्रेडिंग अनुप्रयोग हो जुन बेनामी समूहले हाम्रो समाजमा असमानताहरूसँग लड्नको लागि विकसित गरेको हो। यस रोबोटको विकास गर्ने टोलीले क्रान्तिकारी ट्रेडिंग रोबोट डिजाइन गरेको दाबी गर्छ, क्रिप्टोकरको शोषण गर्न सक्षम छrenसाइ बजार र प्रयोगकर्ताहरूको लागि लाभ उत्पादन।
यस Anon System समीक्षा हामी यसको सुविधाहरूमा अनुप्रयोगको विश्लेषण गर्ने छौं, यो विश्वसनीय छ कि छैन निर्धारण गर्छौं र प्लेटफर्मको वेबसाइटमा कसरी खाता खोल्ने भन्ने बारे चरण-चरण गाईड प्रदान गर्दछौं।
Anon System एक स्वचालित क्रिप्टोकर होrenसाइ ट्रेडिंग रोबोट जुन क्रिप्टोकरको अन्वेषण गर्दछrenसाइ बजार र यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि लाभदायक ट्रेडहरू फेला पार्दछ, सायद प्रति दिन $ 1000 उत्पादन, कम से कम यसको वेबसाइट अनुसार। के यो सबै सत्य हुनेछ? के यो केवल घोटाला हो? हामी सँगै फेला पारौं।
के हो Anonsys?
Is Anonsys एक घोटाला?
कसरी गर्छ Anonsys काम?
कसरी खाता खोल्ने Anonsys?
का प्रमुख सुविधाहरू Anonsys
लाभदायक ट्रेडिंग सफ्टवेयर
साधारण दर्ता प्रक्रिया
त्यहाँ छ Anonsys अनुप्रयोग?
म फिर्ता लिन सक्छु Bitcoin मेरो बाट Anonsys खाता?
मैले यसको लागि ब्रोकर छान्नु पर्छ Anonsys म?
मैले लगानी गर्नु पर्छ Bitcoin संग Anonsys?
Anonsys बेनामी प्रोग्रामरहरू र व्यापारीहरूको समूहले सिर्जना गरेको एक नवीन वाहन रोबोट हो। वेबसाइटले दाबी गरेको छ कि यसको सफ्टवेयरले क्रिप्टोकरमा विसंगतिहरू फेला पारेर यसको प्रयोगकर्ताहरूको तर्फबाट उच्च नाफा कमाउन सक्षम छ।rency मूल्यहरु। रोबोटले प्रयोगकर्ताहरूलाई अज्ञात रूपमा ट्रेड गर्न अनुमति दिन्छ, यसको मतलब प्लेटफर्मका सबै सदस्यहरू प्रयोगकर्तानाम "AnonTrader" अन्तर्गत लुकेका छन्।
रोबोटको वेबसाइटका अनुसार यो ट्रेडिंग सफ्टवेयर बेनामी समूहको हिस्सा हो, जसले सामान्यतया सरकारहरू र केही व्यक्ति-नियन्त्रित बैंकहरूलाई आक्रमण गर्दछ। यो ज्ञात छ कि यो ट्रेडिंग अनुप्रयोगले लगानीकर्तालाई पैसा उत्पन्न गर्न सक्छ; र प्रमाण साइटमा एक भिडियो मा पोस्ट गरीन्छ प्रत्यक्ष ट्रेडिंग अपरेशन देखाउँदै।
हाम्रो परीक्षणबाट Anonsys सुरक्षित र भरपर्दो पाए। यसले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई साँच्चिकै बेनामी बनाउँदछ, सायद ईन्क्रिप्टेड नेटवर्क प्रयोग गरेर, जसले यसको सदस्यहरूको आईपी ठेगाना पनि परिवर्तन गर्दछ, ताकि तिनीहरूको कुनै पनि गतिविधि ट्र्याक गर्न सकिएन। यस तरिकाले, तपाईंको खातामा सबै पैसा तपाईंको हो र तपाईं योसँग जेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, पुन: निवेश वा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ।
प्रणाली वास्तवमै बेनामी समूह द्वारा डिजाइन गरिएको हो
यसले २/// काम गर्दछ, त्यसैले सबैले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्
ग्राहक समर्थन उत्तरदायी छ, तर केवल ईमेल मार्फत उपलब्ध छ
विगतमा समीक्षा गरिएका अन्य ट्रेडिंग रोबोटहरू जस्तै, Anonsys स्वचालित ट्रेडिंग सफ्टवेयर प्रदान गर्दछ जसले यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि नाफा उत्पन्न गर्न सक्छ। यो ट्रेडिंग अनुप्रयोग सानो मूल्य फरक पाउन सक्छrenक्रिप्टोकरमा सेसrenसाइ बजार र उनीहरूको फाइदा लिनुहोस्।
जबकि यो प्रविधिको सही तरीकाले कसरी काम गर्छ भनेर जान्न असम्भव छ, तर यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि धेरै नयाँ ट्रेडिंग रोबोटहरूले क्रिप्टोकरमा प्रवेश गरिरहेका छन्।renसाइ बजार उही तरीकाले।
उच्च फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग (HFT) बहस आर्थिक बजारमा स्वत: ट्रेडिंग मेशिन प्रयोग गर्ने नैतिकतामा मूलतः बहस हो। यद्यपि धेरै ट्रेडिंग मेशिनहरू मन पराउँछन् Anonsys 1990 को दशकको शुरुदेखि नै स्वतन्त्र रूपमा स्टक, फोरेक्स र फ्युचर मार्केटमा कारोबार गरेको छ र पूर्ण कानूनी छ।
Anonsys कसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया काम गर्दछ देखाउन एक विस्तृत भिडियो प्रस्तुत गर्दछ। लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको खातामा फन्ड गरेपछि Anonsys प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई "विनियमित" ब्रोकरको ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा जोड्दछ, जहाँ स्वचालित ट्रेडिंग मेसिनले प्रति मिनेट हजारौं आदेश पठाउन सक्छ।
यसको वेबसाइटमा, Anonsys प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको स्वत: ट्रेडिंग मेशिन प्रयोग गरेर कसरी व्यापार सुरू गर्ने भनेर बताउँछ। यो ट्रेडिंग रोबोटका अनुसार, दर्ता प्रक्रिया धेरै सरल छ र यसमा तीन द्रुत चरणहरू सामेल छन्:
पहिले, तपाईंले आधिकारिकमा दर्ता गर्नुपर्नेछ Anonsys वेबसाइट र तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसले नाम, थर, ईमेल ठेगाना र पासवर्डको छनोट समावेश गर्दछ। भिडियोले देखाए जस्तै तपाईको उपकरणमा IP ठेगानाको आधारमा तपाईलाई तुरंत एक विश्वसनीय र नियमन ब्रोकरमा हस्तान्तरण हुनेछ। तपाईं त्यसपछि ट्रेडिंग खातामा कोष जम्मा गर्नु अघि डेमो खातामा ट्रेडिंग मेशीनको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
देखि Anonsys सफ्टवेयर १००% लाभदायक र सुरक्षित छ, तपाइँ तपाइँको सम्बन्धित ब्रोकरसँग तपाइँको खाता कोष गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तविक बजारमा कुनै समय बिना नै व्यापार सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि Anon system न्यूनतम निक्षेप आवश्यकताहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दैन; जहाँसम्म, हामीले केहि प्रयोगकर्ताहरूबाट रिपोर्ट पढ्यौं कि त्यहाँ minimum २ .० को न्यूनतम आवश्यकता छ।
ब्रोकरको ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा लगईन गरे पछि र तपाईंको खातामा धन जम्मा गरेपछि, तपाईं सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ Anonsys सफ्टवेयरले "सुरुवात प्रणाली" बटनमा क्लिक गरेर। संग Anonsys प्रणाली स्वचालित रूपमा तपाइँको तर्फबाट लाभदायक ट्रेड मा कुराकानी हुनेछ।
यहाँ केहि मुख्य सुविधाहरु छन् Anon System यसका सबै प्रयोगकर्तालाई प्रस्ताव गर्दछ:
Anonsys यसको सदस्यहरूको गोपनीयतालाई ठूलो महत्त्व दिन्छ, र त्यसैले सबै प्रयोगकर्ताहरू "AnonTrader" प्रयोगकर्ता नाम अन्तर्गत लुकेका छन्। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ तपाइँको रकम लगानी गर्न अज्ञात तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ, यो Anon system राम्रो समाधान हुन सक्छ।
Anon System ट्रेडिंग सफ्टवेयरको नाफा को एक ठूलो हिस्सा साझा। रोबोटले दाबी गर्दछ कि सदस्यहरू प्राय: एक बनाउँछन् daiहजारौं युरो को ly लाभ। हामी ग्यारेन्टी दिन वा पुष्टि गर्न सक्दैनौं कि तपाईं यस अनुप्रयोगको साथ ट्रेडिंगबाट फाइदा उठाउनुहुनेछ, तर हामीले सफ्टवेयरको साथ राम्रो नतिजा देखेका दाबी गर्ने प्रयोगकर्ताहरूबाट धेरै सकारात्मक समीक्षाहरू पाएका छौं।
पञ्जीकरण प्रक्रियामा तीन द्रुत चरणहरू हुन्छन् र, अनुसार Anonsys, यो एक पेशेवर खाता खोल्न र व्यापार सुरू गर्न केहि मिनेट लाग्छ।
Anonsys सबैको लागि उपलब्ध छ, कुनै पनि प्रकारको उपकरणमा, अपरेटि system प्रणाली प्रयोग नगरी। यसैले वेब आधारित प्लेटफर्म प्रयोग गर्न यो सजिलो छ। तर तपाइँ ट्रेडिंग शुरू गर्नुभन्दा पहिले, केहि दिशानिर्देशहरू पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सबै भन्दा पहिले, यदि तपाईं संग व्यापार गर्ने निर्णय Anon System, ट्रेडिंग प्लेटफर्म परीक्षण गर्नको लागि तपाईंले तपाईंको फन्डहरूलाई जोखिममा लिनु पर्दैन। दर्ता पूरा गरेपछि, तपाईं भर्चुअल पैसाको साथ व्यापार सुरु गर्न सक्नुहुनेछ र जाँच गर्नुहोस् कि रोबोट एल्गोरिथ्मले माथि उल्लेखित सफलता प्रदान गर्दछ।
यो Anonsys वेबसाइट लाइभ छ र रोबोटले नियमित दलालहरूसँग काम गर्दछ। त्यसकारण, यो एक घोटाला जस्तो देखिदैन। यद्यपि सफ्टवेयरको बारेमा रहस्यको हावा छ, र यो नयाँ रोबोट भएको कारण त्यहाँ अनुप्रयोगको बारेमा धेरै जानकारी छैन। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ Anonsys अटो ट्रेडिंगका लागि नयाँ रोबोट हो, जुन धेरै लगानीकर्ताहरूले सायद प्रयोग नगरेको हो।
यद्यपि प्लेटफर्मले दाबी गर्दछ कि यसले दिनमा हजारौं यूरो उत्पादन गर्न सक्दछ र हाम्रो परीक्षणहरूको अनलाइन विश्लेषणले यसको पुष्टि गर्दछ जस्तो देखिन्छ, यो अझै नयाँ सफ्टवेयर हो र ट्रेडिंगसँग सम्बन्धित जोखिमहरू अझै पनि कायम छ। यसैले, यदि तपाइँसँग व्यापार गर्ने निर्णय गर्नुहोस् Anon system, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले न्यूनतम निक्षेपको साथ शुरू गर्नु पर्छ र मात्र जोखिम उठाउनुहोस् जुन तपाईले गुमाउन सक्नुहुन्छ।
होइन, जे होस्, यदि तपाइँलाई ब्रोकर तोकिएको छ जसले बीटीसी मार्फत निक्षेप र निकासीहरू स्वीकार गर्दछ, तपाइँले तपाइँको रकम यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ Bitcoin साथै।
हो, एकचोटि तपाईले नयाँ खाता दर्ता गरेर खोल्नुभयो, Anonsys तपाइँसँग बहु दलालहरूसँग काम गर्न सुझाव दिन्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईले छान्नु भएको ब्रोकरमा निर्भर रहँदा तपाईले अर्को खाता खोल्नु पर्ने हुन सक्छ।
Bitcoin क्रान्तिकारी सम्पत्ति हो र यसको मूल्य यी दिनहरूमा बढ्न जारी छ। यस बाहेक, यदि तपाईंले नयाँ खाता खोल्नुभयो भने Anonsys वेबसाइट, सफ्टवेयरले दिनको कारोबारको लागि बीटीसी प्रयोग गर्दछ तर लामो लगानीको लागि होईन। अवधि